डिप्रेसनको शारीरिक कारण र अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी मनोरञ्जन समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार समुदाय, कल्याण समुदाय औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य भारी खेल
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य बीचको लिंक
शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य बीचको लिंक
शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य जोडेको छ - आफ्नो शरीर को फिटनेस भावनाहरु लाई प्रभावित गर्न सक्दछ, र यसको विपरित। खराब शारीरिक स्वास्थ्य, पुरानो रोगले निम्त्याएको मुद्दाहरू सहित, मानसिक रोगको विकासको जोखिमलाई बढाउन सक्छ। खराब मानसिक स्वास्थ्यले तपाईको शारीरिक अवस्था विकास गर्ने सम्भावना अधिक हुन्छ। यसको विपरीत पनि सत्य हो। जब तपाईं राम्रो निद्रामा हुनुहुन्छ, नियमित व्यायाम गर्दै, र स्वस्थ खानुहुन्छ भने यसले मानसिक स्वस्थताको लागि ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
शारीरिक गतिविधि यति फाइदाजनक छ कि धेरै चिकित्सकहरूले यसलाई चिन्ता, डिप्रेसन, पोस्ट-ट्राउमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, र ध्यान घाटा hyperactivity अस्वस्थता जस्ता सर्तहरूको एक प्राकृतिक उपचार मान्दछन्।
कोरोनाभाइरस दिन प्रतिदिन लक्षण हल्का मामला
एकचोटि तपाईंले दिमाग-शरीरको सम्बन्ध बुझ्नुभयो भने, तपाईं स्वस्थ जीवनशैली सिर्जना गर्न कदम चाल्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य अभ्यासहरूलाई समर्थन गर्दछ।
शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य बीचको सम्बन्ध
शारीरिक स्वास्थ्य पौष्टिक खाना खाने, पर्याप्त निद्रा प्राप्त गर्ने, र तपाईंको शरीरलाई सामान्य तौल कायम राख्न र हृदय रोग, मधुमेह, र केही क्यान्सर जस्ता शारीरिक समस्याहरूको जोखिम कम गर्न पर्याप्त मात्रामा सार्नको संयोजन हो। सक्रिय हुनुले रक्तस्राव सुधार गर्दछ, मांसपेशी र हड्डीहरूलाई सुदृढ पार्छ, र तपाईंको लामो आयु बाच्ने सम्भावना बढाउँछ। यसमा धूम्रपान र अत्यधिक मदिरा सेवन जस्ता अस्वस्थ बानीहरू हटाउने पनि समावेश छ।
मानसिक स्वास्थ्य को अनुसार तपाईंको भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, र सामाजिक कल्याण समाहित छ menthehealth.gov । यसले तपाइँ कसरी सोच्ने, महसुस गर्ने, कार्य गर्ने र अन्यसँग सम्बन्धित हुने प्रभाव पार्दछ। यो तपाइँको मुड, व्यवहार, र तपाइँ कसरी तनाव ह्यान्डल समावेश गर्दछ।
दुई जोडिएको छ जोडदार। तपाईको शरीरको ख्याल गर्दा तपाईको मानसिक सुस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्छ, तर जब एक अस्वीकार, अन्य अक्सर पनी गर्छ। मानसिक स्वास्थ्य अभ्यासमा समग्र दृष्टिकोणले दुबैलाई मद्दत गर्न सक्छ।
जब तपाईं मानसिक रूपमा स्वस्थ महसुस गर्नुहुन्छ, यो तपाईंको दैनिक तालिका कायम राख्न सजिलो छ others अरूलाई देखेर, सक्रिय हुँदै, काममा फलदायी रहन, र दैनिक तनावको सामना गर्न। जब तपाईं एक मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको साथ बस्नुहुन्छ, ती सबै बढि गाह्रो हुन्छ। तपाईं व्यायाम गर्न ऊर्जा नहुन सक्छ। वा, तपाईं फिर्ता लिन र सामान्यतया तपाइँलाई समर्थन गर्ने जडानहरूमा पुग्नको लागि अप नगर्ने महसुस हुन सक्छ। सजिलो, छिटो तयार खाना अझ बढी आकर्षक छ, यदि उनीहरूको पौष्टिक मूल्य छैन भने पनि। छोटकरीमा, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतिहरूले बाधा पुर्‍याउँछ तपाईं सामान्य रूपमा शारीरिक स्वास्थ्य कायम राख्ने तरिका। बदलेमा, यसले तपाईलाई मुटु वा श्वासप्रश्वास रोग जस्ता शारीरिक समस्याहरूको लागि उच्च जोखिममा राख्न सक्छ।
जब तपाईं शारीरिक रूपमा स्वस्थ महसुस गर्नुहुन्छ, यस्तो सम्भावना तपाईंको दैनिक बानीले तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यलाई समर्थन गर्दछ। यदि एक पुरानो अवस्थाले तपाईंलाई व्यायाम गर्नबाट रोक्छ भने यसले तपाईंलाई कसरी महसुस गर्छ, कसरी तपाईं सामाजिकतामा पार्नुहुन्छ, र मानसिक विकारहरू निम्त्याउन सक्छ।
सम्बन्धित: तपाईंको विचारहरूले तपाईंको स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्न सक्छ
डिप्रेसनको शारीरिक कारण र अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू
एक मानसिक स्वास्थ्य मुद्दा बिरामी हुनु को मात्र प्रतिक्रिया होईन। यो रोगको अर्को लक्षण हो। उदाहरण को लागी, डिप्रेसन शारीरिक बिरामी को एक परिणाम हुन सक्छ। यो रोगको लक्षण पनि हुन सक्छ।
विशेष रूपमा, त्यहाँ भड्काउने रोगहरू र मानसिक स्वास्थ्य बीच एक सम्बन्ध हुन सक्छ। सूजन The र सम्बन्धित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया depression उदासीनता, स्किजोफ्रेनिया, र अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर र द्विध्रुवी जस्ता अन्य सर्तहरूसँग जोडिएको छ। A २०१ 2016 मा अध्ययन प्रकाशित भयो पत्ता लगाए कि भ्वा। सम्बन्धी रोगहरू भएको मानिसहरूलाई डिप्रेसन हुने सम्भावना बढी हुन्छ, जो हृदय रोग जस्ता गैर-भडकाउने रोगहरूसँग छन्। अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि सूजनको स्तर बढ्दै जाँदा डिप्रेसनको जोखिम पनि बढ्यो। स्वत: प्रतिरक्षा विकारहरू, भड्काउने रोगहरू मानिन्छ, तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई ओभररेक्ट गर्न निम्त्याउँदछ, यसले सूजन निम्त्याउँछ। धेरै ऑटोइम्यून रोगहरू, जस्तै रुमाटोइड गठिया, लुपुस, गाउट र मधुमेहलाई भड्काउने रोगहरू मानिन्छ।
दीर्घकालीन रोगका साथ मानसिक स्वास्थ्य अवस्था विकसित गर्ने जोखिम बढेको छ। दीर्घकालीन पीडा, निरन्तर उपचार, क्रियाकलापहरू परिमार्जन, र बिमारीको कारण दैनिक जीवनको गुणवत्तामा अवरोधहरू सबै लक्षणहरू ट्रिगर गर्न सक्दछन्। उदाहरण को लागी, निम्नलिखित एक विशिष्ट रोग को लागी मानिसहरु को प्रतिशत देखाउँछ डिप्रेसनको साथ बाँचिरहेका ।
कोरोनरी धमनी रोग उच्च रक्तचाप सहित (हार्ट अट्याक बिना): १%% -२०%
पार्किन्सन रोग: %०%
बहु स्क्लेरोसिस: %०%
स्ट्रोक: १०% बाट २%%
धेरै पटक, शारीरिक अवस्थाको उचित व्यवस्थापनले डिप्रेसनको लक्षणहरूलाई कम गर्न वा हटाउन सक्छ। अन्य समय, डिप्रेसन गर्न लक्षित उपचार, जस्तै antidepressants, आवश्यक छ।
जब पुरानो बिरामी तस्वीरको हिस्सा छैन, तपाईं कसरी आफ्नो शरीरको हेरचाह गर्नुहुन्छ त्यसले मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्छ।
व्यायाम र मनोरन्जन
निष्क्रियता डिप्रेसन र अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकारहरूमा योगदान गर्न सक्दछ। व्यायाम अनुसार तपाईको मुडलाई सुधार गर्दछ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ । सक्रिय व्यक्तिहरू आसीन जीवन जीउने भन्दा कम उदास हुन्छन्। नियमित व्यायामले प्रोटीन रिलिज गर्दछ, न्यूरोट्रोफिक वा ग्रोथ कारकहरू भनिन्छ, जसले मस्तिष्कको स्नायु कोषहरू बढाउन र नयाँ जडानहरू गर्न मद्दत गर्दछ, मस्तिष्कको कार्यप्रणाली सुधार गर्दछ। हार्वर्ड स्वास्थ्य । शारीरिक गतिविधि एक्लै गम्भीर उदासी भएका व्यक्तिहरूको लागि पर्याप्त नहुन सक्छ, तर केहि व्यक्तिको लागि, यो एक एन्टीडिप्रेसस जत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ।
आहार र हाइड्रेसन
त्यहाँ पेट र स्वास्थ्यको बीच एक कडा सम्बन्ध छ। अर्को शब्दहरुमा, तपाइँ के खानुहुन्छ यसले तपाइँको भावनालाई असर पार्छ, र तपाइँ कसरी प्रभाव महसुस गर्नुहुन्छ तपाइँको पाचन प्रणाली कार्य गर्दछ। फल, तरकारी, प्रोटीन, फ्याट, र जटिल कार्बोहाइड्रेटको मिश्रण उपभोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। र स्वस्थ खानामा धेरै पानी समावेश हुन्छ। जब तपाईं हुनुहुन्छ डिहाइड्रेटेड यसले शारिरिक लक्षणहरू जस्तै टाउको दुख्ने, जीवाणि, वा थकान cause र पनि मुड परिवर्तन गर्न को लागी पैदा गर्न सक्छ, चिडचिड जस्तै।
सम्बन्धित: पेटको स्वास्थ्यले तपाईंको समग्र स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्छ
सबै कुरा अलि कडा देखिन्छ जब तपाईं राम्रो-विश्राम गर्नुहुन्न। निन्द्रा तपाईंको मस्तिष्कको लागि आवश्यक छ। यसले मेमोरीहरू भण्डारण गर्न र मुडहरूलाई नियमन गर्न मद्दत गर्दछ। र यो कुञ्जी हो कसरी तपाईंको शरीरले कार्य गर्दछ। जब तपाईं पर्याप्त zzz को समात्न सक्नुहुन्न, यसले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली भुक र मेटाबोलिजममा राम्रोसँग कसरी कार्य गर्दछ भन्नेबाट सबैलाई असर गर्दछ।
धुम्रपान र मदिरा
रक्सी र निकोटीन सिगरेटमा प्रभाव पार्छ, र शारीरिक स्वास्थ्यमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ resp श्वासप्रश्वास र हृदय रोगको लागि जोखिम कारकहरू। दुबै पदार्थले मानसिक स्वास्थ्य लक्षणहरुबाट अस्थायी राहत प्रदान गर्न सक्छ, तर त्यो प्रभाव छोटो अवधिको मात्र हो। दीर्घकालीन, दुबै बानी हानिकारक हुन्छन्।
सम्बन्धित: के धुम्रपानले तपाईंको COVID-19 हुने जोखिम बढाउँदछ?
राम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राख्दै
मानसिक र शारीरिक कल्याणको बिचको सम्बन्ध भनेको शारीरिक स्वास्थ जीवनशैली मानसिक स्वास्थ्य र खुशी कायम राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
शारीरिक स्वास्थ्य सल्लाह
निम्न बानीहरूले शारीरिक स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ:
फलफूल र तरकारीहरू प्रशस्तका साथ स्वस्थ आहार खानुहुन्छ
नियमित व्यायाम गर्दै
प्रत्येक दिन धेरै पानी पिउने
पर्याप्त निन्द्रा प्राप्त गर्दै
धूम्रपान छोड्नु, जसले धेरै पुरानो रोगहरूको लक्षणहरूलाई बढवा दिन्छ
तपाईंको सामान्य व्यवसायीको साथ नियमित जाँचले संक्रमणको गम्भीर हुनु अघि रोगका लक्षणहरू समात्न मद्दत गर्दछ, लामो र स्वस्थ जीवनको प्रचार गर्दछ।
यदि तपाईंसँग दीर्घकालीन रोग छ भने, लक्षणहरू प्रबन्ध गर्न पनि आवश्यक छ। यसले समावेश गर्दछ:
तपाइँको डाक्टरको निर्देशन अनुसरण गर्दै र सबै भेटघाटहरूमा भाग लिदै
औषधी लिईएको जस्तै
स्वास्थ्य पेशेवरहरूसँग काम गर्दै — शारीरिक थेरापिष्टहरू, व्यावसायिक थेरपिस्टहरू, भावनात्मक सल्लाहकारहरू
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले तपाईंलाई तपाईंको रोगको शारीरिक प्रभावहरूसँग बस्न सिक्न मद्दत गर्न सक्छन्।
मानसिक स्वास्थ्य सल्लाह
किनकि मानसिक स्वास्थ्यले शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्छ, आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु शारीरिक स्वास्थ्यको हेरचाह जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको मुडलाई बढावा दिन, लचिलोपना बढाउन, र समग्र स्वास्थ्य र जीवनमा सन्तुष्टि सुधार गर्ने केही सुझावहरू:
कृतज्ञता अभ्यास गर्नुहोस् yourself आफैलाई याद दिलाउनुहोस् तीन चीजहरूको जुन तपाईं प्रत्येक दिनको लागि आभारी हुनुहुन्छ
ध्यान, गहिरो सास, योग, र प्रयोग गर्नुहोस् mindfulness ध्यान छूट र तनाव घटाउने प्रचार गर्न
समर्थन नेटवर्क विकास गर्नुहोस्
अरूको लागि केहि राम्रो गर्नुहोस् - तपाइँ कसरी अरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुहोस् प्रायः तपाईका आत्माहरूलाई माथि उठाउँछन्
बाहिर समय खर्च गर्नुहोस्
चिकित्साको संयोजनमा, डिप्रेसनमा बस्ने व्यक्तिहरूले घरमा जीवनशैली परिवर्तन गर्न सक्दछन्, एमडी स्टेफन लोयड भन्छन्। JourneyPure । यसमा स्वस्थ आहार कायम राख्नु, रमाइलो गर्ने रुचिमा भाग लिनु, र नियमित व्यायाम गर्नु समावेश छ। डिप्रेसनको उपचार गर्ने अन्य सहयोगी तरिकाहरूमा ध्यान, योग, एक्यूपंक्चर, र मसाज थेरापी समावेश छ।
यदि तपाईंलाई सहयोग चाहिएमा, यसको लागि सोध्नुहोस्। मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू खोज्ने, जस्तै कुराकानी उपचार वा संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी, तपाईंको भावनात्मक कल्याणको लागि कमजोरीको चिह्न होईन; यो शक्तिको चिह्न हो। कसैलाई खोज्नु भनेको दीर्घकालीन बिमारीको साथ बाँच्न र मानसिक तनावको प्रबन्धको बारेमा कुरा गर्नु तपाईंको शारीरिक रोगको हेरचाह जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
जब जीवनशैली परिवर्तन पर्याप्त हुँदैन
पोषण, व्यायाम, थेरापी, र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको संयोजनले दुबै शारीरिक र मानसिक रोगहरूको विरूद्ध लड्न मद्दत गर्दछ। केही जीवनशैली परिवर्तन गर्नु उज्जवल, हल्का जीवनको लागि पहिलो कदम हुन सक्छ। तर जब तपाईको नियन्त्रण बाहिरका कुराहरु हुन्छन्, हेरचाह खोज्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। दिमाग-शरीर जडान बलियो छ, तर कुनै मानसिक वा शारीरिक समस्यालाई जित्न यत्तिको कडा छैन।
यदि चिकित्सा र जीवनशैली परिवर्तनले दीर्घकालीन शारीरिक अवस्था वा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट राहत ल्याउँदैन भने, औषधी विकल्प हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै प्रकारका पुरानो रोगहरूको लागि प्रभावकारी उपचारहरू छन्।
एकलकेयरले स्वास्थ्य बीमा गर्ने र नगर्ने मानिसहरूलाई धेरै औषधीहरूको लागि %०% सम्म बचत प्रदान गर्दछ। यदि तपाइँको डाक्टरले औषधि तोक्छ भने, सिंगलकेयर साइट वा अनुप्रयोगमा जाँच गर्नुहोस् तपाईको क्षेत्रमा सबैभन्दा उचित मूल्य पाउन।
कति लामो vyvanse को 30mg अन्तिम हुन्छ
रातो मोल के को संकेत हो?
योजनाbलाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
कानको दुखाईको लागी म के गर्न सक्छु?
के तपाइँ zantac र pepcid सँगै लिन सक्नुहुन्छ
बीमा बिना इन्सुलिन कति खर्च हुन्छ?
बिहानको रोग को लागी के सुरक्षित छ
klonopin र xanax एउटै परीक्षण गर्दछ